ကျောင်းတစ်ခုလုံး မီးလောင်ပြာကျခဲ့ သော်လည်း လုံးဝထိခိုက်မှူ မရှိသည့် အံဖွယ်မီးကွင်းဘုရား ⋆ The Moon
ကျောင်းတစ်ခုလုံး မီးလောင်ပြာကျခဲ့ သော်လည်း လုံးဝထိခိုက်မှူ မရှိသည့် အံဖွယ်မီးကွင်းဘုရား
by KZ T in ကြားသိရသမျှ
လောကမှာ ဖြစ်ပျက်တဲ့ ဖြစ်စဉ်တိုင်းမှာ ထူးဆန်းမှုတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်လည်း ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၊ ကျောက်မဲခရိုင် ၊သီပေါမြို့နယ်က မိုင်းလင်းကျေးရွာမှာ ရှိတဲ့ မိုင်းလင်းဘုန်းကြီးကျောင်း အခန့်မသင့်လို့ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းတိုက်တစ်ခုလုံး မီးလောင်ပြကျခဲ့ရပေမယ့်လည်း ဘုရားတစ်ဆူကတော့ မီးမခဘူးလို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါ သတင်းကိုတော့ သီပေါ ကိုအောင်က ယခုကဲ့သို့ မျှဝေထားပါတယ်။ ကျောင်း တစ်ခုလုံး မီးလောင်ပြာကျသွား သော်လည်း ….မီးမခ ဘဲ ….ကျန်ရှိခဲ့သည့် …..ဘုရား ဆင်းတု ရုပ်ပွား တော်….အား…. ၈.၁၀.၂၀၁၉ ရက်နေ့က ဖူးတွေ့ရစဉ် … ၂.၁၀.၂၀၁၉ ရက်နေ့က လောင်ကျွမ်းခဲ့သည့် ပေါ့ဆမီးကြောင့် ….ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၊ကျောက်မဲခရိုင် ၊သီပေါမြို့နယ် မိုင်းလင်းကျေးရွာအုပ်စုရှိ မိုင်းလင်းဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတိုက်မှာ ပြာပုံအတိ မြေခခဲ့ရပြီး …ကျောင်းတိုက်နေ ကိုရင်ငယ်တစ်ပါး မီးသင့်၍ ပျံလွန်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းတိုက်တစ်ခုလုံးပြာကျသွား ခဲ့သော်လည်း ….ကျောင်သက်င်္ခန်ထိပ် တွင် ကိန်းဝပ် စံပယ်တော်မူသည့် မြတ်စွာဘုရားရှင် ရုပ်ပွားတော်မှာ မီးခခြင်း မရှိပဲ ပကတိအတိုင်းသာ ကျန်ရှိနေခဲ့ပါသည်။
ယခုအခါ မီးလောင်သွားသော ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း အသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက် ရပ်နီးရပ်ဝေးမှ့ လာရောက်လှူဒါန်းမှု့များရှိသလို…မီးကွင်း ဘုရားရှင် ရုပ်ပွားတော်အား လာရောက်ဖူးမျှော်သုများဖြင့်အထူးစည်ကားလျှက်ရှိနေသော “မီးမခဘုရား:”အားသွားရောက်ဖူးမျှော်လိုပါ …. သီပေါမြို့ မန္တလေး -လားရိုး ပြည်ထောင်စု လမ်းမကြီး ကုန်းသာကျေးရွာအလည်မှ မှ့၎င်းအတွင်းသို့ကျောက်ကြမ်းအတိုင်းသွားရောက်ဖူးမျှော်နိင် ပါသည်။
အဆိုပါ မီးမခ ဘုရားဆင်းတု ရုပ်ပွားတော်မှာ မီးလောင်နေစဉ် ကလည်း မျက်နှာတော်မှာ မီးမလောင်သည့် နောက်ကျောဘက်သို့လှည့်ကြည့်နေသကဲ့သို့ဖူးမြင်ရကြောင်း …ရွာခံများ၏ ပြောပြချက်များအရသိ့ရပါသည်။ သီပေါ ကိုအောင်…
အဆိုပါ ကျောင်းရဲ့ ကျောင်းထိုင် ဆရာတော် ဦးပညာဇောတ ဖြစ်ပြီး ယင်းကျောင်းမှာ သီတင်းသုံးနေတဲ့ အသက် (၉) နှစ် အရွယ်ကိုယ်ရင်ငယ်လေးဟာ ညအချိန်မှာ ဖယောင်းတိုင်မီးနဲ့ စာကြည့်ရင်း အိပ်ပျော်ခဲ့လို့ ည ၁၀ နာရီခန့်မှာ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။ ယင်းကဲ့သို့ မီးလောင်မှုကြောင့် ကိုယ်ရင်ငယ်လေးလည်း ပျံလွန်တော်မှုခဲ့ရပါတယ်။ ကိုယ်ရင်ငယ်လေးရဲ့ ဘွဲ့အမည်က ရှင်ကုသလ လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါ မီးလောင်မှုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သီပေါမြို့မရဲစခန်းမှာ ( ပ ) ၁၁၅/၂၀၁၉ ၊ ပုဒ်မ ၂၈၅/၃၀၄ မီးပေါ့ဆမှုဖြင့် အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
လောကမှာ ဖွဈပကျြတဲ့ ဖွဈစဉျတိုငျးမှာ ထူးဆနျးမှုတှေ ရှိနတေတျပါတယျ။ အခုဆိုရငျလညျး ရှမျးပွညျမွောကျပိုငျး၊ ကြောကျမဲခရိုငျ ၊သီပေါမွို့နယျက မိုငျးလငျးကြေးရှာမှာ ရှိတဲ့ မိုငျးလငျးဘုနျးကွီးကြောငျး အခနျ့မသငျ့လို့ မီးလောငျမှုဖွဈပှားခဲ့ပါတယျ။ ကြောငျးတိုကျတဈခုလုံး မီးလောငျပွကခြဲ့ရပမေယျ့လညျး ဘုရားတဈဆူကတော့ မီးမခဘူးလို့ သိရပါတယျ။ အဆိုပါ သတငျးကိုတော့ သီပေါ ကိုအောငျက ယခုကဲ့သို့ မြှဝထေားပါတယျ။ ကြောငျး တဈခုလုံး မီးလောငျပွာကသြှား သျောလညျး ….မီးမခ ဘဲ ….ကနျြရှိခဲ့သညျ့ …..ဘုရား ဆငျးတု ရုပျပှား တျော….အား…. ၈.၁၀.၂၀၁၉ ရကျနကေ့ ဖူးတှရေ့စဉျ … ၂.၁၀.၂၀၁၉ ရကျနကေ့ လောငျကြှမျးခဲ့သညျ့ ပေါ့ဆမီးကွောငျ့ ….ရှမျးပွညျမွောကျပိုငျး၊ကြောကျမဲခရိုငျ ၊သီပေါမွို့နယျ မိုငျးလငျးကြေးရှာအုပျစုရှိ မိုငျးလငျးဘုနျးတျောကွီး ကြောငျးတိုကျမှာ ပွာပုံအတိ မွခေခဲ့ရပွီး …ကြောငျးတိုကျနေ ကိုရငျငယျတဈပါး မီးသငျ့၍ ပြံလှနျတျောမူခဲ့ပါသညျ။ ကြောငျးတိုကျတဈခုလုံးပွာကသြှား ခဲ့သျောလညျး ….ကြောငျသကျင်ျခနျထိပျ တှငျ ကိနျးဝပျ စံပယျတျောမူသညျ့ မွတျစှာဘုရားရှငျ ရုပျပှားတျောမှာ မီးခခွငျး မရှိပဲ ပကတိအတိုငျးသာ ကနျြရှိနခေဲ့ပါသညျ။
ယခုအခါ မီးလောငျသှားသော ဘုနျးတျောကွီးကြောငျး အသဈပွနျလညျတညျဆောကျနိုငျရနျအတှကျ ရပျနီးရပျဝေးမှ့ လာရောကျလှူဒါနျးမှု့မြားရှိသလို…မီးကှငျး ဘုရားရှငျ ရုပျပှားတျောအား လာရောကျဖူးမြှျောသုမြားဖွငျ့အထူးစညျကားလြှကျရှိနသေော “မီးမခဘုရား:”အားသှားရောကျဖူးမြှျောလိုပါ …. သီပေါမွို့ မန်တလေး -လားရိုး ပွညျထောငျစု လမျးမကွီး ကုနျးသာကြေးရှာအလညျမှ မှ့၎င်းငျးအတှငျးသို့ကြောကျကွမျးအတိုငျးသှားရောကျဖူးမြှျောနိငျ ပါသညျ။
အဆိုပါ မီးမခ ဘုရားဆငျးတု ရုပျပှားတျောမှာ မီးလောငျနစေဉျ ကလညျး မကျြနှာတျောမှာ မီးမလောငျသညျ့ နောကျကြောဘကျသို့လှညျ့ကွညျ့နသေကဲ့သို့ဖူးမွငျရကွောငျး …ရှာခံမြား၏ ပွောပွခကျြမြားအရသိ့ရပါသညျ။ သီပေါ ကိုအောငျ…
အဆိုပါ ကြောငျးရဲ့ ကြောငျးထိုငျ ဆရာတျော ဦးပညာဇောတ ဖွဈပွီး ယငျးကြောငျးမှာ သီတငျးသုံးနတေဲ့ အသကျ (၉) နှဈ အရှယျကိုယျရငျငယျလေးဟာ ညအခြိနျမှာ ဖယောငျးတိုငျမီးနဲ့ စာကွညျ့ရငျး အိပျပြျောခဲ့လို့ ည ၁၀ နာရီခနျ့မှာ မီးလောငျမှုဖွဈပှားခဲ့တာလို့ သိရပါတယျ။ ယငျးကဲ့သို့ မီးလောငျမှုကွောငျ့ ကိုယျရငျငယျလေးလညျး ပြံလှနျတျောမှုခဲ့ရပါတယျ။ ကိုယျရငျငယျလေးရဲ့ ဘှဲ့အမညျက ရှငျကုသလ လို့ သိရပါတယျ။ အဆိုပါ မီးလောငျမှုနဲ့ ပတျသတျပွီး သီပေါမွို့မရဲစခနျးမှာ ( ပ ) ၁၁၅/၂၀၁၉ ၊ ပုဒျမ ၂၈၅/၃၀၄ မီးပေါ့ဆမှုဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ထားတယျလို့လညျး သိရပါတယျ။
သူမရဲ့ ရင်သားအကွာအဝေးကို ဝေဖန်နေတဲ့သူတွေကို ပါးပါးလေးခနဲ့လိုက်တဲ့ စူးရှထက်
ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များ ရဟတ်ယာဉ် (၇)စီးဖြင့် ထပ်မံရောက်ရှိ
တစ်ရက်တည်းနဲ့ ကြည့်ရှုသူ (၅) သိန်းကျော်သွားတဲ့ ဈေးလမ်းမပေါ်မှာ မြန်မာ့ရိုးရာဘောလုံးနဲ့ခြင်းလုံးကို စကေးပြခဲ့တဲ့ မြန်မာအဘိုးအိုတစ်ဦး